Layma's World: ၂၀၀၈ ကိုမျက်နှာသစ်ပေးလိုက်တယ်
Posted by lay-ma at 7:45 PM
အလိမ်ညာတွေ ။ ထားခဲ့တယ်
ကိုင်း သားကြွက် 2009 ကိုလာပီး မပေးနဲ့တော့ အကြွေး :P ;)
လေးမရဲ့ နှစ်သစ်မှာ တောင်းတဲ့ဆုပြည့်ပါစေ.. နောက်ဆုံးအပုဒ်လေး ကြိုက်တယ်.. :)
အပေါ်က ညီကြွက်ကို ထပ်အားဖြည့်လိုက်တာ :)
အစ်မကြီးလို ကွန့်မန့်ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရေးတတ်ချင်တယ် :)
လူတိုင်း အတွက် မမှားနိုင်တဲ့ ဆုတောင်းမျိုးပဲဗျ..
စာရေးကောင်းတဲ့ မလေးမ. နှစ်သစ်မှာ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ကျန်းမာမှု၊ ချမ်းသာခြင်း နှင့် လိုရာ ဆန္ဒတွေ အားလုံး (ကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့ အတူ) ပြီးမြောက် ရယူ နိုင်ပါစေခင်ဗျာ. :)
မလေးမရေ.. နောက်နှစ်ကူးရင်... ဒီစာသားမျိုးလေးနဲ့ 2009 ကိုအပြစ်မဖွဲနဲ့နော်.. ကျနော် သူ့ဘက်မှာရှိတယ်.. ဟားဟား.. ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျာ နှစ်သစ်မှာ..
ကဗျာလေး ကြိုက်တယ် အစ်မရေ ၊ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ။
၂၀၀၈ကိုများ သူ့ရဲ့မမွေးရသေးတဲ့ ပုစုခရုလေးကျနေတာပဲ ပြောနေလိုက်တာ
မမရေ ရေးဟန်လေးက မိုက်လှချည်လား။ အတွေးလေးကို ခပ်သွက်သွက်ပုံစံမျိုးနဲ့ ရေးထားတာ တအားဖတ်လို့ကောင်းနေတယ်။ မမဆုတောင်းတွေလည်း ပြည့်ပါစေနော်။ :)
Happy New Year!! :-) ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
၂၀၀၈ကို မျက်နှာသစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ ညအိပ်ခါနီးမှ မျက်နှာ်သစ်သလို ဖြစ်နေသလားလို့။ ပြီးမှ အစ်မ ဘာဆိုလိုချင်မှန်း သဘောပေါက်တယ်။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ြ ပန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
လူလည်မဟုတ်ရပါဘူးအမရယ်...အမလေးမ စာတွေကိုဖတ်ရရင် စိတ်ထဲတော့
တစ်ခုခုတော့တွေးဖြစ်တာပဲ အမလေးမ စိတ်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
ကျနော်က လူတွေရဲ့စိတ်ကို ဖတ်ရတာ ၀ါသနာပါတယ်အမရဲ့....အမတို့ ၂ ဦးလည်း
နှစ်သစ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းရင်း ဂါရ၀ပြုခဲ့ပါတယ်အမလေးရေ....
အော် ကျနော်သိတဲ့အမစိတ်တစ်ခု အဲဒါ အမလေးမ က တွေးခေါ်တဲ့နေရာမှာ
ဗရမ်းဗတာ မနိုင်ဘူး မာန်မာနမကြီးမှုနဲ့ တည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုကို မျက်မြင်
အားဖြင့်သိနိုင်သလို လိမ္မာမှုနဲ့ မှန်ကန်မှုကို စကားစမြည်ပြောဆိုတာ နဲ့
ကံသာလျှင် အမိ ကံသာလျှင်အဖ ဆိုပေမယ့် ညဏ်သာလျှင်အမိ ညဏ်သာလျှင်အဖ ဆိုတာ ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ တရားမိုလို့ ညဏ်ကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
ကံသာလျှင် အမိ ကံသာလျှင် အဖဆိုတာကတော့ လောကစကားပေါ့ဗျာ....
ကဗျာလေး ကတယ်ဟုတ်ပါလား မလေးမ။ ၂၀၀၉ မှာ ကံကောင်းပါစေ။
ညီမက မျက်နှာဖုံး လဲတပ်လိုက်တယ် အောက်မေ့တာ.. မျက်နှာပါ သစ်ပေးလိုက်တော့ ကောင်းတာပေါ့..
Happy New Year ပါနော်.. မလေးမ.. ညီမ ခုတလော ဘလော့မလည်ဖြစ်လို့ ခုမှ နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်..
HAPPY NEW YEAR ...mama